Vaovao - Inona no atao hoe WPC Cladding & Ahoana ny fampiasana azy?
WPC cladding dia teny arafitra. Izy io koa dia fitaovana fananganana tontolo iainana ampiasaina any ivelany matetika. Ny cladding dia afaka manatsara ny insulation sy ny estetika an'ny trano.
Iray amin'ireo tombony lehibe indrindra amin'ny fitafiana ny faharetany sy ny vidiny fikojakojana ambany. Azo ampiasaina mandritra ny 10-15 taona izy io. Ny rafitra fametahana rindrambaiko napetraka araka ny tokony ho izy dia manampy ny trano hanohitra ny famakiana azy vokatry ny fiovaovan'ny hafanana tafahoatra, ny tara-masoandro, ny rivotra mahery ary ny loto amin'ny rivotra (toy ny bobongolo). Ny cladding dia afaka miaro ireo fitaovana etsy ambany amin'ny fitaoman'ny hamandoana ateraky ny orana sy ny lanezy. Ny cladding koa dia afaka manatsara ny laharan'ny afo amin'ny tranobe. Ny fanandramana momba ny fitsapana sy ny fadin-tseranana dia manaporofo fa ny laharam-pifanarahanay dia B1 isa.
Na dia zava-dehibe aza ireo tombony azo amin'ny firafitra azo ampiharina, ny arkitekto sy ny tompon-trano koa dia hisafidy ny endrika sy ny lokon'ny akanjo arakaraka ny fomba, ny endrika ary ny loko hamoronana endrika hatsarana tsy manam-paharoa.
Raha ampitahaina amin'ny fitaovana mitafy hafa, ny fampiasana veneer WPC amin'ny cladding dia manana tombony maro.
1. Tsy ilaina fasika na tombo-kase isan-taona, izay mety ho fizotran'ny asa mafy ho an'ny tabilao, indrindra ireo any ivelany izay sarotra tratrarina.
2. Ny akorandriaka vita amin'ny kitay hazo sy fananana manohitra ny fadingana ary manohitra ny foulure dia manome hatsarana kanto.
3. Tsy toy ny hazo, vita amin'ny sarimihetsika plastika 95% namboarina sy chips vita amin'ny hazo vita aminy izy io, ary manome antoka 20 taona amin'ny fanjavona sy ny fandotoana ny vokatra sy ny tetik'asa ara-barotra sy an-trano.
Fotoana fandefasana: Aug-27-2021